Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Denmark oo Siminaar Aqoon-Iswaydaarsi ah Kuqabtay Xafiiska Jaaliyada ee Copenhagen
OYSU Denmark oo Siminaar Aqoon-Iswaydaarsi ah Kuqabtay Xafiiska Jaaliyada ee Copenhagen
Waxaa siminaar heer sare ah qabtay Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Somalida Ogadenya (OYSU) ee wadanka Denmark. Siminaarkan iyo Aqoon-Iswaydaarsigan ayaa lagu qabtay xarunta Jaaliyada Denmark ay kuleedahay magaalada Copenhagen. Siminaarkan oo loogu talogalay wacyi galinta da’yarta Somalida Ogadenya ee kudhaqan Denmark. Waxaa lagu soo bandhigay duruus kusaabsan sooyaalka taariikhda Ogadenya iyo heerarka kala gadisan ee wadanka Ogadenya soomaray.
Dhanka kale waxaa lagu soo bandhigay oo lagu daawaday munaasabadan filin aad umugo badan. Filinkan ooy kasoo duubeen xubno kamid ah OYSU Denmark xeryaha xaqootiga ee Kenya ayaa aad ukiciyay dareenka iyo shucuurta dhalinyaradii kasoo qaybgashay munaasabadan. Waxaa lagu soobandhigay filinkan warbixino maqal iyo muuqaal ah oo kusaabsan xaalada Qaxootiga Somalida Ogadenya ee kusugan xeryaha Kenya. Qaxootigan oo kasoo baro-kacay dhibaatada uu Gumaysiga Itoobiya kuhayo shacabka Somalida Ogadenya.
Waxaa kale oo siminaarkan aan kamadhnayn suugaan halgameed ay soobandhigeen xubno kamid ah OYSU-Denmark. Gabadh yar oo kamid ah dhalinyarada ayaa ka akhriday madasha gabay aad uxiisa badan oo kusaabsan xaalada Ogadenya. Simanaarkan ayaa laga gaadhay ujeedooyinkii loosoo agaasimay taasoo ay xubnihii kasoo qayngalay aad oogu diirsadeen. Waxayna isku balansadeen sidii la,iskaga kaashan lahaa wacyi-galinta iyo abaabulka dhalinyarada Somalida Ogadenya ee kudhaqan wadanka Denmark.